Umhlonyane yikhambi ebelisetshenziswa - Ilanga News
Home Izindaba Umhlonyane yikhambi ebelisetshenziswa
UKWELAPHA KWESIZULU: SOLWAZI OEHM NXUMALO
NGITHI mangikhulume ngokwelapha kwesiZulu khona engikwaziyo kancane. ngiyenqena ukuthi wukwelapha kwesintu, nokho kukhona imithi engike ngahlangana nayo eyelapha izifo ezehlukene ngokwezizwe ezinsundu ezehlukene.
Noma singezona izinyanga kodwa njengabantu abadala abanye bethu bakhuliswa ngakho ukuchathwa nokuphalaza, sakhishwa inyoni.
Mina ngayolahlwa ( ukukhishwa inyoni) yisalukazi okwakuthiwa nguNokwesaba Nkosi nginezinyanga ezintathu ngizelwe.
Uma sewulahliwe wawungayidingi iPhillips Milk of Magnesia futhi wawungethuki ukhale uma kuduma izulu ngoba wawuchathelwa kuso isishozi sezulu.
Sagcatshwa, sashunqiselwa ngezinyamazane, abanye baboshwa ngezintambo zensonto emnyama okhalweni besanda kuzalwa. Abanye babhuqwabhuqwa emlotheni ezaleni, bashiywe isikhashana uma begula ngoba bengamakhosi (bangamawele).
Indaba isuswe wukuphawula ukuthi uhulumeni bekufanele ungabashiyi ngaphandle abelaphi bendabuko mayelana ne-Covid-19. Kuthe kusenjalo, kwaqhamuka ukwazi okuthi umhlonyane uyaselapha lesi sifo.
Lokhu kungikhumbuze umshikashika nomdonsiswano ngokuthi insangu yayinakho ukwelapha umdlavuza, okwathi ekugcineni kwemukelwa lokho, okunamuhla kunobubhudubhudu bokucela izimvume zokulima umthunzi wezinkukhu.
Ake sithinte wona-ke umhlonyane:
Umhlonyane unezinhlotshana ezine noma eziwu-5, okungenza ukuthi kuya ngokuthi umile ku-phi, ukubanda nokufudumala, ezivandeni, emasimini, endaweni engavundile noma ngaseziba-yeni zezinkomo.
Isihlahla sawo sicishe sifane nesikanukani, kodwa amaphunga azo ahlukene kakhulu.
Sakhula lesi sihlahlana eside ngokucishe kufike edolweni noma ngezansana sisetshenziswa kakhulu ekwelapheni umkhuhlane wezingane.
Sicutshelwa emanzini bese efudunyezwa kancane bese iyaphuziswa-ke ingane uma ikhwehlela, inesifuthefuthe somkhuhlane, iklapalata noma ihanjiswa yisisu.
Lo muthi uyaphuzwa njengesiphungo noma njengetiye. Izinga-ne futhi zazibuye zichathwe nga-wo. Isihlahla somhlonyane amaBhunu asibiza nge-tuingras kanti ngokwesayensi kuthiwa yi-cotula anthemeides L. Olunye uhlobo lomhlonyane kuthiwa wumhlonyane
omncane, ngesilungu kuthiwa yi-wilde-als noma i-wormwood.
Nawo usetshenziswa njengetiye noma kuchathwe ngawo. Kuthiwa abaTswana nabaVenda bayagquma ngalo muthi belapha ikhanda nomkhuhlane. Kusetshenziswa amacembe afudunyeziwe. Kubuye kwelashwe izinduna, amathumba, ukuqunjelwa, izenyelo, isifo sikashukela nokuhla-nza igazi elibi ngalo muthi.
E-Eastern Cape naseLesotho, uyasetshenziswa umhlonyane; nakhu-ke sekuvela ukuthi naseMadagascar uyasebenza futhi bathi uyayijijimeza iCovid-19.
E-Afrika esempumalanga kuthathwa izimpande zigxotshwe besekwenziwa imbiza yokwelapha izilwane esiswini, umphimbo obuhlungu nokuqunjelwa.
Kukhona okuthiwa yinhlonhlwane, isiphapha noma umhlonwane:
Lolu hlobo kuthiwa yi-Euphorbia woodu NE Br. Ngokocwaningo lukaTony “Mashesha” Pool-ey, lwango-1993 – owayengumcubunguli wemvelo – kuthiwa amaZulu asishisa emasimini lesi si-tshalo ukuze kube nesivuno esihle.
AbasemaXhoseni babeka umhlonyane ngaphandle kwendlu okubekwa kuyo amawele asanda kuzalwa. Uyasetshenziswa futhi ukukhipha inyongo ngaphansi.
Lona usetshenziselwa izifo ezihlasela isikhumba, kusetshenziswa amahlamvu awo. Uvamise ukubizwa nge-beesbossie, miskruise, stinkruid.
Ngokubona kwami, indaba eyinselelo enkulu kubantu abafisa ukufunda noma ukuqondisisa ngalolu hlobo lokwelapha bengewona amaZulu noma bengazi ngokwanele ngamasiko abantu, yisidingo sokwazi ukuthi kutholakala kanjani ukuthi isiguli siphethwe yini.
Kulalelwa esikuchazayo isiguli? Sikuchaza kanjani? Kulalelwa umbiko futhi esesifika nawo otholakale kwababhulayo okuthiwa ngababonayo? Kwesinye isikhathi okuphathelene nabapha-nsi kuphuma esangomeni noma kobonayo, bona abebengakwazi.
Umbuzo oyaye ungabuzwa ngowokuthi emndenini bakhona yini abake babaphikise ababo-nayo? Kubonakala ukuthi ababonayo babona iqiniso? Kusuke sekwenzenjani uma sebebona ngo-kungafani uma kuyiwa kubo ngokwehlukana?
Kunobulungiswa obungakanani nhlangothi zonke ukubuza ukuthi basuke sebebuze ngomlando noma bafuna ukukhanyiseleka ngesifo kangakanani ngaphambi kokuba babone?
Kwehlukaniswa kanjani phakathi kwezifo ezibangwa wukonakala kwegazi noma kokusebenza okufanele kwezitho zomzimba nalokho okungakholwa ngogulayo ukuthi uloyiwe?
Kwesinye isikhathi kuhlolwa (ukubhula) kubonakale ukuthi kuthukuthele abaphansi. Isiguli nabakubo bake bakholwe wukuthi kalukho usizo olugcwele olungatholakala ngaphandle kokuba kushwelezwe. Lokho kusho ukuthi isiguli sizele ukuzothiba noma ukuzonciphisa nje ubuhlungu, hhayi ukuselapha?
Indaba eyimpamba ukuthi isiguli sizoyigcina yini imilayelo kadokotela njengokungadli ukudla okumuncu, ukungadli inyama ebomvu noma eyosiwe, ukungadli ukudla okunosawoti, ukuyeka utshwala, ukungadli inyama enonile, amaqanda nophuthu? Khumu nina bakwethu. Ngiyabonga isineke senu.
Previous articleIzoqiniswa imithetho yokuvalwa kwezwe KwaZulu-Natal
Next articleBashe bangqongqa abangani kugujwa usuku lokuzalwa